Dood cilmiyeed ka dhacday Minneapolis: Dhibaatadda Somalia, Ethiopia & Geeska Afrika
Somali Institute for Peace and Justice Minneapolis, MN
Jan 30, 07: Xabashida iyo magaalooyinka: Galkacyo (66), Baydhabo (45), Beledweyne (37), Muqdisho (34), Kismaayo (30)..
Minneapolis: Shir cilmiyeed balaaran oo lagu gorfeeynayay raad-reebka eey keeni karto duulaanka gardarradda ah ee ciidamadda Itoobiya ku soo qadeen gudaha Soomaaliya iyo saameeynta duulankani ku yeelan karo xiriirka labada dal ayaa galabnimadii Sabtida ee taariiqdu ku beegneeyd Janaayo 27, 2004 lagu qabtay Magaaladda Minneapolis ee Gobolka Minnesota.
Shirka waxaa soo qabanqaabiyay Machadka Soomaaliyeed ee Nabadda iyo Cadaaladda ee ka dhisan isla magaaladda Minneapolis.
Dood Cilmiyeedkan waxuu dhaxmarayay aqoonyahanno iyo indheergarad u kala dhashay Soomaali iyo itoobiyaan Dhinaca Soomaalidda waxaa matalayay Dr. Cali Khaliif Galayr oo mar ahaan jiray Wasiirkii kowaad ee Soomaaliya (Carta), iminkana wax ka dhiga Jaamacadda Minnesota, Imaam Xasan Jaamici oo isna barre ka ah Kuliyadda sharciga ee William Mitchell iyo Saynab Xasan oo ah aqoon-yahanad Soomaliyeed marna ahaan jirtay Gudoomiyahii ururka Israac.
Dhanka Itoobiyaanka waxaa matalayay Dr. Solomon Gashaw oo cilmiga xagga bulshadda ka dhiga Jaamacadda Minnesota iyo Dr. Selameab Wold-Tsadik oo mar qaramadda midoobay ka ahaan jiray la taliya xagga horumarka.Dadweyne ku u dhaafaya ilaa iyo 300 ayaa soo buuxiyay madashii dood-cilmiyeedka lagu qabtay. Aqoonyahanadda ayaa midba markiisa ka hadlay shirka iyadoo aqoon yahan kastaba mowduuc gooni ah balse la xiriira xasaradda geeska Afrika ka aloosan halkaas ku lafa guray.
Mowduucyadii halkaa looga xaajooday waxaa ka mid ahaa hababka dib-u-hishiinta, doorka Islaamka ee geeska Afrika, xiriirka taariiqi ee labadda dal, loolan qabyaaladda iyo qowmiyadda ee dhinaca awooda, xuquuqda aadamiga iyo weliba danaha itoobiyaanka eek u aadan Soomaaliya.
Waxaa aqoonyahannada halkaas isku dhaafsadeen aragtiyadooda waxeeyna isla qireen in xad-gudubka itoobiya uu yahay gardaro cad kana soo horjeedda xeerarka caalimiga ah. Waxeeyna ugu baaqeeyn Itoobiya ineey si dhaqso leh ciidankeeda ugala baxdo gudaha Soomaaliya.Hadaaneey taasi dhicin oo uu Meles Zenawi iyo dawladda Itoobiya ciidankooda duulaanka ah dib ula laaban Soomaalidda waxaa u furan dagaal iyo kacdoon lagu xoreeynayo dalka ayuu sheegay Dr. Cali Khaliif Galayr.
Islaamku kuma ahan Qatar Itoobiya waayo in ka badan kala bar dadka Itoobiyaanka ah ayaaba Muslim ah ayuu isna sheegay Imam Xasan Jaamici Machadka Soomaaliyeed ee Nabadda iyo Cadaaladda oo lahaa qabanqaabadda shirkan ayaa waxuu wadaa barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan arimaha Soomaaliya. Waxaana dood-cilmiyeedkan xigi doono shir-weyne lagu martiqaaday Mudanayaal ka tirsan aqalladda congress-ka iyo senate-ka mareeykanka oo dhawaan la filayo inuu dhaco.